श्रीमानले १३ बर्षिय श्रीमती रीतालाई ६ महिनापछि बारीमा छोडेर आफ्नै कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेपछि ! – PathivaraOnline
Home > समाज > श्रीमानले १३ बर्षिय श्रीमती रीतालाई ६ महिनापछि बारीमा छोडेर आफ्नै कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेपछि !
श्रीमानले १३ बर्षिय श्रीमती रीतालाई ६ महिनापछि बारीमा छोडेर आफ्नै कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेपछि !
admin February 10, 2019 समाज 0
ओखलढुंगा – गत वर्षको असोज महिनामा रीता गजमेरको मोबाइलमा अपरिचितको फोन आयो। फोन उठाइन्, बोलिन्। नचिनेको मान्छे भएकाले रङ नम्बर भनेर फोन काटिन्। त्यसपछि त्यही नम्बरबाट दैनिक फोन आउन थाल्यो। सुरुसुरुमा धेरै कुराकानी नभए पनि पछि फोनमै चिनजान भयो। उनलाई फोन गर्ने सुनिल विक रहेछन्। रीता र सुनिलबीच कुराकानीको क्रम लम्बिन थाल्यो। रीताले सुनिलसँग कुरा गर्ने क्रम बढाइन्। नागरिक न्युजमा खबर छ ।
भन्सारले क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन छिर्दा नदेख्ने तर गरीब नेपालीले ल्याएको एक टुक्रो सुनमा आँखा गाड्दै हिड्ने, के यो सुहायो ? – भिडियो
कान्छी भित्र्याउँदै थिए जेठी श्रीमती छोरो सहित मण्डपमा आएपछि भयो यस्तो भागाभाग (भिडियो सहित)
बर्षौ देखी श्रीमती गायब । अहिले आएर श्रीमानको किरीया । सम्पत्ती पचाउन किरीयाको नाटक गरेको आरोप (भिडियोसहित)